Nidaamka waxbarashada ee Finnishka - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Nidaamka waxbarashada ee Finnishka
Waxbarashada Finland waa mid heerkeedu sareeyo. Farqiyada natoojinka waxbarasho ee u dhexeeya dugsiyada kala duwan waa kuwa yar, ku dhowaad dadka oo dhanna waxey dugsiga dhexe ku dhameeyay waqtiga loogu talagalay. Waxbarasho-horaadka, waxbarashada aasaasiga ah iyo waxbarashada heerka labaad waa lacag la’aan, xittaa markaas kaddib waxbarashadu inta badan waa lacag la’aan. Ujeedadu waa in dadka oo dhan ay fursad u helaan waxbarasho tayo leh oo aan ku xirneyn dakhliga qoyska iyo in in loo barbaaro sidii muwaadin firfircoon.
Nidaamka waxbarashada waxaa ku jira barbaarin-horaad, waxbarasho-horaad, waxbarashada heerka labaad, waxbarashada sare. Waxbarashada dadka waaweyn waxaa loogu talagalay dadka waaweyn waxaana ku jira fursado kala duduwan oo ka billowga tan aasaasiga ah illaa iyio atcliinta sare.
Finland carruurtu waxay xaq u leeyihiin barbaarin-horaad ka hor inta aanay gaarin da’da dugsiga. Barbaarin-horaadka waxaa lagu qabanqaabiyaa xannaano-maalmeedyada iyo xannaano-maalmeedka qoyska. Waxaa kale oo uu cunuggu waalidkiis tusaale ahaan kala qaybqaadan karaa barbaarin-horaadka furan jardiinada ciyaarta. Hadafku waa in la taageero horumarka iyo nolol wanaagga cunugga iyo in sare loo qaado siinnaan waxbarashada. Cunuggu wuxuu barbaarin-horaadka ku baranayaa waxyaabaha ay kamidka yihiin aqoonta bulshada iyo luqadda, aqqoonta gacanta iyo macluumaadyo kala duwan. Waxaa kale oo uu cunuggu baranayaa aqoonta ka caawinaysa in uu wax sii barto.
Waxaa maalmaha ku jira ciyaar iyo bannaan socosho badan. Haddii afka hooyo ee cunugu uu yahay wax aan aheyn Finnish ama Iswidhis, wuxuu kaalmo u helayaa barashada afka Finnishka ama Iswidhiska. Waxbarasho gaar ah ayuu xittaa cunuggu heli karaa, haddii uu u baahanyahay.
Finland degmooyinka ayaa barbaarin-horaadka qabanqaabiya. Waxaa lagu maalgeliyaa lacagta canshuurta, waana sababta ay qiimo ahaan qoysaska ugu jaban yihiin. Waxaa kale oo Finland ka jira barbaarin-horaadyo gaar loo leeyahay. Carruurta waxaa la shaqaynaya macallimiinta barbaarin-horaadka ee la tababaray, sooshal iyo carruur-hayeyaal.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan barbaarin-horaadka ka sii aqri bogga InfoFinlandi ee Barbaarin-horaadka.
Finland cunuggu waa in uu ka qaybqaataa waxbarasho-horaadka hal sano ka hor inta aanu waajibka waxbarashadu billaaban. Inta badan waxbarasho-horaadku waxay billaabataa sannadka uu cunuggu lix sano buuxiyo. Waxbarasho-horaadka waxaa qabanqaabiya degmooyinka qoyskana waa u lacag la’aan. Waxaa bixiya macallimiinta barbaarin-horaadka, kuwaas oo tacliin sare leh. Inta badan waxbarasho-horaadka waxaa la qaataa Isniinta illaa iyo Jimcaha afar saacadood maalinti inta lagu jiro wakhtiyada shaqada dugsiyada. Ka sokow waxbarasho-horaadka, cunuggu wuxuu sidoo kale ka qaybqaadan karaa barbaarin-horaadka.
Mudada sanadka ah wuxuu cunugu baranayaa xirfado uu ka faa’iideysanayo marka uu dugsiga dhiganayo sida xarfaha. Wax aqrin weli lama baranayo. Haddii afka hooyo ee cunugu uu yahay wax aan aheyn Finnish ama Iswidhis, wuxuu kaalmo u helayaa barashada afka Finnishka ama Iswidhiska. Maalinta waxaa sidoo kale ku jira ciyaar iyo banaan socosho.
Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarasho-horaadka.
Finland waxbarashada aasaasiga ah waxay billaabataa sannadka uu cunuggu todobo sano buuxiyo. Dhammaan carruurta sida rasmiga ah Finland u deggan waa in ay ka qaybgalaan waxbarashada aasaasiga ah. Dugsiga hoose-dhexe waa sagaal fasal-dugsiyeed.
Finland waxbarashada aasaasiga ah waxaa haga sharci degsan. Waxaa kale oo la isticmaalaa aasaasyada qorshe waxbarasheedka dalka oo dhan iyo qorshe waxbarasheedyo deegaan ah.
Waxbarashada aasaasiga waxaa qabanqaabiya degmooyinka qoysaska waa u lacag la’aan. Waxbarashada fasalka koowaad iyo labaad waa ugu yaraan 20 saacadood oo waxbarasho ah todobaadki, tiradaasna waa ay sii kordhinaysaa marka la gaaro fasallada sare.
Finland dhammaan macallimiinta dugsiga dhexe waxey heystaan shahaadada derajada labaad ee jaamacadda. Macallimiinta fasalka dugsiga ee wax u dhiga fasalka 1-6 waxey ku takhasuseen cilmiga barbaarinta. Macallimiinta fasallada 7-9 waxey ku takhasuseen maadooyin ay iyagu dhigaan.
Macallimiintu waxey heystaan xorriyad ballaaran oo ay si xornimo leh ku qabanqaabin karaan waxbarashada iyagoo ku saleynaya qorshaha waxbarashada qaranka iyo deegaanka. Muddooyinku u dambeeyay qorshaha waxbarashada waxaa xoogga lagu saaray waxyaabo ay ka mid yihiin maadooyinka dhan oo ballaaran, baaritaanka ififaalooyinka nolol-maalmeedka, iyo farsamada aqoonta teknikada iyo war tekniikada isgaarsiinta.
Ilmuhu waxey inta badan heystaan macallin isku mid ah lixda sano ee ugu horeysa. Wuxuu si wanaagsan u baranayaa ardaydiisa isagoo aqoon u yeelanaya horumarinta waxbarasho iyagu ku haboon. Halka yool ee muhiimka ah waa in ardaydu ay bartaan u fikiridda si madaxbaan iyo in ay mas’uuliyadda waxbarashada qaataan.
Macallimadda waxey dugsiga ku qiimeynaysaa horumarka ardayda. Dhammaan dhibcaha waxbarashada aasaasiga ah waxaa bixiya macallimadda. Imitixaano rasmi ah oo dalka oo dhan ma jiraan. Taas beddelkeeda waxaa lala socdaa qiimeyn qeyb ka soo qaadasho ku saleysa. Waxaa kuwaas la qabanqaabiyaa inta badan fasalka sagaalaad.
Haddii cunugga ama da’yarku uu dhowaan u soo guuray Finland, wuxuu heli karaa waxbarashada loogu diyaarinayo waxbarashada aasaasiga ah. Waxbarashada diyaarinta ah waxey inta badan qaadataa hal sano. Taas kaddibna wuxuu ardaygu sidii luqad labaad u sii baran karaan Finnishka ama Iswidhishka, ama luqad S2 ah, haddii asaga ama ayada uu baahan yihiin in barashada luqada lagu kaalmeeyo.
Muhaajiriinta qaangaarka ah ee aan dalkoodi ka soo qaadan shahaadada dugsiga dhexe waxey dugsiga sare ee dadka waaweyn ku baran karaan dugsiga.
Warar dheeraad ah ku saabsan waxbarashada aasaasiga ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarashada aasaasiga ah.
Waxbarashada heerka labaad
Waxyaabaha la kala dooran karo waxbarashada asaasiga ah kaddib waa dugsi sare iyo waxbarasho xirfadeed. Waa waxbarashada heerka labaad. Waxbarashada heerka labaad ardayda waa u lacag la’aan.
Waajibka waxbarashada ee Finland wuxuu ballaartay sannadki 2021. Dugsiga hoose-dhexe kaddib dhammaan dhallinyaradu waa in ay wax sii bartaa illaa iyo inta ay ka dhammaynayaa waxbarashada heerka labaad ama ay ka gaarayaan 18 sano.
Da’yarku waa in codsadaa waxbarashada heerka labaad, haddii uu ku jiro fasalka 9aad dugsiga hoose-dhexe ee guga 2021 ama kaddib.
Dugsiga sare waa waxbatasho aqoon guud ah, mana ahan mid laga baranayo wax xirfad ah. Inta badan dugsiyada sare waxaa lagu bartaa maaddooyin la mid ah kuwa waxbarashada aasaasiga ah, laakiin waxbarashada ayaa ka adag kana ikhtiyaar badan. Ugu dambayn ardaydu waxay inta badan qaataan shahaadada ardayga sare. Dugsiga sare wuxuu qaataa 2-4 sano, ardayga ayeeyna ku xiran tahay. Markaas kaddib ayaa la iskudayi karaa gelitaanka jaamacadda, dugsiga xirfadda ee tacliinta sare ama waxbarashada xirfadda ee dugsiga sare ku salaysan.
Dugsiyada sare intooda badan luqada wax laga baro waa Finnish ama Iswidhish. Magaalooyinka waaweyn waxaa wax looga bartaa luqad kale, tusaale ahaan Ingiriis ama Faransiis.
Dadka waaweyn waxey maadooyinka dugsiga sare ka baran karaan dugsiga sare ee dadka waaweyn. Waxaa suurtagal in halkaas laga qaato koorasyo gaargaar ah ama in laga qaato dhammaan tirada maadooyinka dugsiga sare iyo shahaadada ardayga sare.Waxbarashada waxaa ku jiri kara waxbarasho dugsiga lagu qaadanayo, mid aqoon-dirsad ah, mid shabakadda lagu baranayo iyo waxbarasho madaxbanaan.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada dugsiga sare ka aqri bogga InfoFinlandi Dugsiga sare.
Dugsiga sare waxaa loogu baahan yahay aqoon luqadeed wanaagsan. Haddii afka hooyo ee ardaygu uu yahay mid ka duwan Finnish ama Iswidhish aqoontiisa luqaduna aysan weli ugu filneyn wax ka barashada dugsiga sare wuxuu fursad u heystaa in uu codsado waxbarashada diyaarinta ah ee dugsiga sare. (LUVA). Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Dugsiga sare.
Waxbarashada xirfaddu waa mid ka waxqabad ahaan ka badan tan dugsiga sare. Halkaas waxaa lagu baran karaa qiyaastii saddex sano waxbarashada xirfadda aasaasiga ah. Inta mihnadda shaqada lagu jiro ayaa waxaa la samayn karaa xirfad ama xirfadda gaarka ah. Waxyaabaha muhiimka ah ee ku jira waxbarashada xirfaddu waa wax ku barashada nolosha shaqada. Haddii aad doonayso waxaad waxbarashada xirfadda ka sii wadan kartaa illaa iyo waxbarashada dugsiga tacliinta sare.
Waxaa sidoo kale suurtagal in qaab aqoon muujin ah loo sameyn karo shahaadada xirfadda ama takhasuska xirfadda.
Waxbarashada xirfadeedka waxaa sidoo kale lagu qaadan karaa heshiis waxbarasho. Markaas wuxuu ardaygu ka shaqeeya goob shaqo oo laga qabto mihnaddiisa, wuxuu shaqada ka helayaa ugu yaraan mushaar u dhigma mushaarka shaqo ku tababarashada isagoo islamarkaasna qaadanaya waxbarashada.
Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarasho xirfadeed.
Haddii aqoonta luqadeed ama aqoonta waxbarasho aysan ku filneyn barashada xirfadda, waxaad iyada ka hor codsan kartaa waxbarashada diyaarinta ee waxbarashada xirfadda (VALMA). Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarasho xirfadeed.
Waxbarashada heerka labaad kaddib waxaa la sii wadan karaa waxbarashada dugsiga tacliinta sare. Finland waxaa waxbarashada dugsiga tacliinta sare ka bixiya dugsiyada tacliinta sare ee xirfadda iyo jaamacadaha. Dugsiyada tacliinta sare iyo machadyadu iyaga ayaa go’aansada xulashada ama qaadashada ardayga.
Dugsiga tacliinta sare waxey waxbarashadiisu ardayga u noqon kartaa lacag la’aan ama lacag. Lacag sanad-dugsiyeedka waa in la bixiyaa, haddii aan la aheyn Muwaadin Midowga Yurub ama wadamada ETA ama xubin ka tirsan qoysaska muwaadiniintaas islamarkaasna aad qaadaneyso waxbarashada shahaadada kowaad ama labaad ee jaamacadda oo afka Ingiriiska ku baxaya.
Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland.
Waxbarashada dugsi xirfadeedka tacliinta sare waa ka waxqabad badan tahay tan jaamacadda. Waxbarashada waxaa sidoo kale ku jira wax ku barashada shaqada. Waxbarashada dugsi xirfadeedka tacliinta sare waxaa lagu dhameyn karaa 3,5-4,5 sano. Haddii markaas ka dib aad dooneyso in aad sameyso tacliinta sare ee dugsi xirfadeedka waa in aad marka hore soo sameysaa 3 sano oo shaqo ah oo isla mihnaddiisa ah. Warar dheeraad ah ka sii aqri bogagga InfoFinlandi Iskuul xirfadeedka sare.
Waxbarashada jaamacaddu waxey ku saleysan tahay baaritaan cilmiyeed. Jaamacadda waxaa lagu qaadan karaa shahaadada koowaad ee jaamacadda qiyaas ahaan saddex sano kaddibna qiyaas ahaan labo sano ayaad ku qaadan kartaa shahaadada darajada labaad ee jaamacadda. Jaamacaduhu waxey sidoo kale qabanqaabiyaan barnaamijyo waxbarasheedyo lagu sameeyo afka Ingiriiska. Baarnaamijyada waxbarashada badankood waxey ku baxaan afka finnishka ama iswidhishka.
Marka aad dhameyso waxbarashada mastareedka, waxaad codsan kartaa sii wadista waxbarashada si aad u qaadato shahaadada ruqsadda macalllinnimada jaamcadda ama doktoreydka.
Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Jaamacadaha.
Bogga InfoFinlandi ee Dalbashada waxbarashada waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida loo codsan karo waxbarashada heerka labaad iyo waxbarashada tacliinta sare ee Finland. Haddii aad qorsheynasyo wax ku barashada Finland, warar dheeraad ah ka sii aqri bogagga InfoFinlandi ee Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland.
Waxaa kale oo Finland ka jira machadyo badan oo bixiya waxbarashooyin loogu talaggalay dadka oo dhan da’kasta oo jireen, kuwaas oo aan darajo aqooneed lagu qaadan. Inta badan waxbarashooyinkan waxaa loogu talaggalay dadka waaweyn. Machadyada noocaan ah ee hawlaha aqoonta guud ee xorta ah waa machadyada aqoon-kororsiga dadka waaweyn, kulleejooyinka aqoon-kororsiga, jaamacadaha xagaaga, xarumaha waxbarashada iyo xarumaha waxbarashada jimicsiga.
Waxbarashooyinka waa aqoon guud. Waxaad baran kartaa tusaale ahaan luqado, maadooyin farshaxaneed, shaqo gacmeedyo iyo isgaarsiinta. Waxbarashadu inta badan lacag yar ayeey u tahay ardayga.
Xaaldaha qaarkood marka lagu jiro waxbarashada machadyadu waxey noqon kartaa lacag la’aan. Tusaale ahaan haddii waxbarashada wax qoris akhrinta ah ama waxbarasho luqadeed kale lagu daray qorshahaada la qabsashada, wax lacag ah lagaama qaadayo.
Haddii aad dooneyso in aad barato afka Finnishka ama Iswidhiska, warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Iswidishka.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 09.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir